Isitolo esidayisa yonke impahla Laminate Floor For Wholesales nochungechunge olujwayelekile Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki | Moyo
Usayizi: 1218x240mm, 1218x198mm
Ubukhulu: 7mm 8mm 10mm 10.5mm 12mm
Umphezulu Izinkuni-okusanhlamvu Embossed
Ikilasi le-Abrasion: ac1 / ac2 / ac3 / ac4
Uhlobo Oluyinhloko Hdf
Izici zomkhiqizo: I-Wide Plank
Ukufakwa: Chofoza Ndawonye - Okunamathiselwe ku-Underlay
Iwaranti Yokuhweba: Ukukhanya Kweminyaka emithathu
Iwaranti Yokuhlala: Unyaka we-20
Isihloko se-Tsca Vi Compliant
Ca Isigaba 01350 Esihambisanayo
IGrenguard Gold Certified
Ukuphindaphinda Iphethini: 12 Ngokushintshaniswa Kwebhodi
I-laminate flooring yinto ehlanganisiwe yaphansi. Iqukethe izingqimba eziningi, sekuphele iminyaka engaba ngu-50, futhi yakhelwe ukwengeza isitayela nenani ekhaya lakho ngenkathi iqhubeka nokuguga. Kaningi, yakhelwe ukubukeka njengokhuni (kepha hhayi njalo).
Kepha lokho kumane nje kuyiphuzu leqhwa. Kulezi zinsuku, kunezinhlobo zezinhlobo ezahlukahlukene zephansi le-laminate-ngayinye inezinto zayo ezihlukile nezimbi. Futhi ngenkathi kuvame ukucishwa ngenxa yenani lentengo eliphansi ngokuqhathaniswa nokubukeka kwangaphambi kokuzenzela (i-xoxo ngawo-1980), i-laminate flooring isizenzele yona njengohlobo oluqinile, oluhehayo, olonga imali nolungaphansi.
Ngezansi, sizokunikeza i-411 kuzo zonke izinto zokulaminetha. Sizokhuluma ngalokho okwenziwe nge-laminate, intengo yaphansi, ukuqina kwayo, lapho ungayifaka khona, ukuthi ungayifaka kanjani, ngisho nobuhle nobubi.
Iyini i-Laminate Flooring Made ye ?
Ngokubanzi, i-laminate flooring yakhiwe izingqimba ezintathu. Kusuka ezansi, yilezi:
Uqweqwe oluminyene noma ungqimba lwesisekelo seplywood noma i-high-density fiberboard ukunika amandla wezinto nokuqina. Lesi sisekelo siyefana esisetshenziswa emikhiqizweni eminingi yokhuni eyenziwe ngobunjiniyela.
Isendlalelo sesithombe sokucaca okuphezulu, esingokoqobo. Futhi, lesi sendlalelo sesithombe ngokuvamile silingisa ukhuni — kepha ungathola ukubukeka kwamatshe ngisho nokuhlukahluka kokubukeka kwensimbi.
Isendlalelo sokugqoka sokuvikela ukunikeza ubulukhuni nokuvikelwa. Lesi sendlalelo sinzima kakhulu, senza i-laminate enye yezinketho ezihlala phansi kakhulu ezungeze.
Ungazifaka kuphi i-Laminate Flooring?
I-laminate ilungele izindlela zokungena, ukungena, amakamelo okudlela, namakamelo okuhlala (ngoba ungqimba lwayo lokuqina oluqinile kusho ukuthi ingakwazi ukumelana nomgwaqo osindayo nonya). Kepha ukubonakala kwayo okuhle kukwenza ukuthi ilungele ngokuphelele amakamelo okulala, amakamelo omndeni, namakhishi kwezinye izimo.
Langaphambilini laminate floor for parquet imibala
Olandelayo: Emuva Emuva